हातखु’ट्टा घिसार्दै जी’न्दगी ल’तार्ने शा’रदाको संघर्ष – कस्ले सुनिदेला, कस्ले बुझिदेला ? – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > हातखु’ट्टा घिसार्दै जी’न्दगी ल’तार्ने शा’रदाको संघर्ष – कस्ले सुनिदेला, कस्ले बुझिदेला ?
admin October 7, 2020 जीवनशैली	0
शारदा शर्मा – आज भन्दा ७ बर्ष अगाडि ! तत्कालीन जिल्ला विकास समिति रुकुमको प्राङ्गणमा केटीहरुको भिडभाडको बिचमा देखिएको एउटा विचित्रको दृश्यले मेरो ध्यान तान्यो । दुबै हात जमिनमा टेकेर पुरै शरीर लतार्दै, घिर्सिदै हिड्ने मानिसको त्यो अवस्थाले मेरो मात्र हैन धेरैको ध्यान खिचिरहेको थियो ।
असह्य शा रिरीक पी डा बोकेर शरीरलाई ढुंगा र माटोमा लतार्ने भविष्यका सूनौला सपना बोकेर जिल्ला सदरमुकाम मुसिकोट आएकी थिईन,उनी अर्थात २६ बर्षीया शारदा शर्मा ।
अब यसरी सबै तहका परीक्षा सञ्चालन गर्न पाइने, यस्तो छ सरकारकाे सहमति!
दुःखद खबरः जाजरकोट जीप दु’र्घ’ट’नामा वडाध्यक्षसहित ६ जना रहेनन्!
यति साह्रै भाग्यमानी हुन्छन् ती श्रीमानहरु, जसले यी ६ गुण भएकि युवतीसँग विवाह गर्छन्
छोरीहरुसँग थाइल्याण्ड बसेर नेपाल आइपुगेकि हिमानी के १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्लिन त? (भिडियो हेर्नुहोस)